Iji meziwanye njikwa njikwa, melite nka arụmọrụ, ma gbasaa echiche ọrụ, na Machị 15, 2020, a haziri ndị na-arụ ọrụ n'ihu iji duzie ọzụzụ izu na-esote. Isi ọdịnaya nke ọmụmụ a gụnyere akụkụ abụọ: ikike ọrụ ọrụ nke ndị ọrụ na -emepụta ihe yana ikike njikwa saịtị. N'ụtụtụ nke 16, n'okpuru nduzi nke onye na-ahụ maka mmepụta ihe, ọ na-eme nleta na ọmụmụ ihe. N'ehihie, ọ mụtara ọrụ ahụ dịka usoro nke ngbanwe ahụ, kwekọrọ na nkà ọrụ na njikwa saịtị nke ọnọdụ ahụ. N'ime usoro mmụta niile, ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ anyị na-adọ aka ná ntị, na-amụsi ihe ike, na-arịọ maka ndụmọdụ jiri obi umeala, ma na-egosipụta mmụọ dị mma.
Na Mee 10, 2020, e kpebiri itinye ọtụtụ igwe na-ebi akwụkwọ na ebe a na-azọcha ụkwụ. Iji bipụta ụdị usoro dị elu dị mma karị, enwere ike itinye ya na ụdị akwa akwa. Site n'ime ruo n'èzí, ọ na-enye onye nwe ya nchekwa na nkasi obi na-eyi nke ọma. N'ihe banyere ịdị mma, ịchụso nchekwa, na-adịghị ada ada, mweghachi dị elu, njikwa mma ka mma, na ịchọ mgbanwe na ihe ọhụụ na ọrụ, ụdị na akụrụngwa, iji mepụta ngwaahịa ka mma.
Iji meziwanye nkà na-arụ ọrụ yana echiche ọrụ, na Septemba 14, 2020, ka ndị ọrụ dị mkpa sonye na nkuzi nkuzi ihe ọmụma bụ isi, ọdịnaya mmụta bụ isi bụ usoro ọrụ nke usoro nke ọdịnaya yana echiche metụtara ya nke ihe ọmụma dị n'ime. Asọmpi ihe ọmụma dị n'etiti ha na-eme ka ụlọ ọrụ ọkachamara ya mara ihe nke ọma. N'ebe dị jụụ ma dị egwu, ndị ọrụ ga-enwe nghọta ka mma, na ọrụ ahụ n'ehihie ga-eme ka ha rụọ ọrụ nke ọma ma dịkwuo irè.